Ingiriiska - Wikipedia
Ingiriiska (Af Ingiriis : England; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa gobolka ugu wayn Midowga boqortooyada Britan Waxey xuduud la leedahay iskotland oo ay xaga waqooyi xuduud ka wadaagan, dhanka galbeedna waxa ay xuduud ka wadaagaan wels iyo bada Ireland goobta hada loo yaqaano ingiriisku waxa uu ka koobmay dhaqamo iyo qoomido badn waxana uu taariikh soo jireena leeyahay ilaa 35.000 oo sano laakiin marka la eego magaca ingiriis asal ahaan waxa uu kayimi mid kamida qabiiladihii dagay halkaas ee katagay wadamada waqooyiga yurub somali ahaana magacan marka lagu dhawaaqayo waxa uu noqon karaa (ingiriiska) ee maaha in la odhan karo ingiriis waayo taasi waxa ay sheegaysaa luqada ingiriisku waxa uu dawlad midaysan noqday sanadii 927 taariikhda miilaadiga xiligii horu marka iyo warshada oo bilaabmay qarnigii 15aad waxa uu ingiriisku caalamka ku yeeshy raad dhaqan iyo mid cilmi iyo mid shaqo oo aad u wayn luqada ingiriisaga sharciga ingiriiska oo ah mid maanta meelakasta laga isticmaalo waxa ay ka imaadeen wadanka ingiriiska daka kunool ingiriiska tiradoodu waa ilaa 51 milyon waa 84% dadka kunool boqortooyada midawday ama uk dawladan ingiriisku waxa ay lamidawday dhamaan boqortooyooyinka kale ee uk sanadii 1800 o ay la bexeen magaca Great Britain.
1.1 Taariikhda guud ee Somaliland casriyadii hore ilaa iminka
3 Xiliyada aadka u fogfog
4 Qarniyadii dhexe
Taariikhda iyo 18 may 1991. In ka badan 10 sano oo halgan hubaysan oo ay hogaaminayeen xoogagii jabhaddii SNM ka dib, waxay waxgaradka, siyaasiyiinta, aqoonyahanka iyo hormuudka qabaa’ilka iyo bulshada Somaliland ku heshiiyeen 18kii May in ay la soo noqdaan xorriyadii luntay 26kii June 1960.
18ka May waa maalin ku suntan taariikhda Somaliland. Waa maalin jiilashii hore u ah xusuus, jiilasha danbena dhiirigelin iyo rajo. Waa maalin ay ka badbaaday Somaliland inay ku dhacdo god madow. Waa maalin mudan in dib loo xasuusto taariikhdii madoobayd ee halgankii, rafaadkii, barakacii, iyo baa’bii ku dhacay bulshada Somaliland. Waa maalin mudan in la xasuusto kumanyaalkii halyey ee u duurgalay inay dulliga ka dulqaadaan shacabkooda. Waa maalin mudan in loo duceeyo intii ku geeriyootay halgankii dheeraa ee dalka loo soo maray. 18May waa maalin mudan in laga farxiyo agoontii iyo dumarkii ay ka tageen halgamayaashaasi. Ma soo koobi karno qiimaha ay maalintani ugu fadhido qarankan, iyo muhiimada ay leedahay.
Taariikhda guud ee Somaliland casriyadii hore ilaa iminkaEdit
Taariikhdii bilawga ahayd ee casri jaahiligii. Somaliland waxay ku taal geeska Afrika, dhinaca Waqooyi galbeed waxa ka xigay deris la tahay dalka Jamhuuriyada Jabouti, galbeedna waxaa ka xiga Ethiopia, barina waxaa ka xiga somalia. Tirada dadka Somalilad waxaa lagu qiyaasaa 5 malyan iy badh. Baaxadda dhulka ay ku fadhido Somaliland waa 139,000 km2. Somaliland waxaa dhinaca waqooyiga ka xiga badda cas oo ku fadhida xeeb dhererkodu yahay 908 km2.
Somaliland oo leh taariikh aad u balaadhan dadkuna aanu wada aqoon. Waxay kamid tahay meelaha ugu horraysay ay ka hana qaaday ilbaxnimada adduunku. Dadka taariikhda ku xeeldheeri waxay sheegeen in farraaciintii hore asalkoodu Somali kasoo jeedaan. Deganaana jireen dhulka xeebaha badda cas, taasoo markii danbana ay xidhiidh qoto dheer la lahaayeen Somaliland. Waxaana xaddaaradda Somaliland ku simantahay ilaa 7000 sanadood ciise hortii.
Xiliyada aadka u fogfogEdit
Kadib markii ay romanku kabexeen ingiriiska waxa ay noqotay mid halis u ah weeraro ay kusoo qaadan saksonku Saxons dola dad ingiriiska waxaliilka ugudhaw ee la odhankaro waxa ku noa ay noqon kartaa 780,000 kun kahor lafaha dadeed ee ugu dada wayn ee ingiriiska laga helay waxa lagu qiyaasay in ay jiree 500,000 oo sano waxa kale oo la ogyahay in ingiriisku uu yahay meel ladagi karayaya xiligii dhagaxa amaba xiligii aanu dadku aqoon dhagax mooyee wax kale.
Kadib markii ay kabexeen ciidamadee roomaanku ingiriisku waxa uu baylah u noqday weeraro ay kusoo qaadan saksonku Saxons kuwaas oo ka imanayya wadamada waqooyiga yurub taasi way dhacday oo waxa kusooduulay xiligaas ciidamo kayimi ama dad ah kuwa looyaqaano saxons oo qaar iyana kayimi wadamada iskandaneefiyanka hada looyaqaano inkastoo aan wax sidaas usii badan oo cadaymaa lagahayn ahada. Waxa lahayaa qoraalo aad iyo aad u yar oo xiligaas kahadalay awaxaana xiligaas looyaqaana xiligii madoobaa.
↑ 2011 Census: KS201EW Ethnic group: local authorities in England and Wales, Office for National Statistics, 18 April 2014
↑ Population Estimates for UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland: mid-2015
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingiriiska&oldid=222715"
Last edited on 2 Nofeembar 2021, at 07:14
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Nofeembar 2021, marka ee eheed 07:14.